PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ခဲတလုံးဖြင့် ငှက်နှစ်ကောင်ပစ်ချသော ကချင်စစ်ပွဲ
ပြည်တွင်းစစ် မီး စမွှေးပြီး စစ်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်သယ်ကဘယ်သူလဲ? ... အဖြေက ရှင်းရှင်းကလေးပါ…အာဏာရူးကြီးမူးကြီး သန်းရွှေတို့ ပဉ္စလက်ဆယ်ဖြာနဲ့ အရှင်ထွက်ရာအကြောင်းကလေး မတိုင်ခင် တရုတ်ပြည်ခရီးမှာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကို ပေးခဲ့တဲ့ ဘုံးဘောလအော ဂတိတွေကြောင့် မြစ်ဆုံမှာ လောဘတောင်တွေပုံပြီး တာပိန်မှာ လူလိမ်တွေ ဂတိကို ချိုးဖေါက်လို့ ကချင်ချေသလုံးပလွေ၇ိုးတွေကို နေပြည်တော်က သွားကြားထိုးတံစစ်တပ်နဲ့ အပေါက်ဖေါက်ပြီး လေပြေမှုတ်ဖို့လုပ်ရာက စစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါစို့….
ခုတော့ ခွက်ပြောက်သွားမှာ ကြောက်လို့ သူတောင်းစားတအုပ်က တောင်းခံခွက်တွေ လူသူတွေနဲ့ဝေးရာ တရုတ်ပြည်မှာ သွားဝှက်ထားကြတဲ့သဘောပါ။
သူတို့ ၀ှက်ထားတဲ့ ခွက်အမျိုးစားတွေက စုံသဗျာ…
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခွက်….ခွက်ပေါင်းစုံသမှ စုံလို့ပါ…ထိုခွက်များထဲတွင် ပြည်တွင်းစစ် ဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ခဲ့သော ခွက်ကြီးဖြစ်သည့် မြစ်ဆုံရေကာတာခွက်ကတော့ကချင်ပြည်သားများတင်မက မြန်မာတပြည်လုံး ၀ိုင်းကန်လိုက်ကြလို့ ပိန်လိမ်သွားလေပြီ။ သို့သော် ကျောက်ဖြူ ရွှေဂစ်မှာတော့ဖြင့် လှိုင်လှိုင်ဖြစ်ထွန်းစွာ ငွေရောင်မြွေကြီးတကောင်မှ တရုတ်ပြည်သို့သွယ်တန်းကာ မျိုချလိုက်လေ၏။